ज्योतिष तथा हिन्दू शास्त्रमा विभिन्न अंग फर्फराउँदा हुने घटनाबारे लेखिएको छ । मानिसको शरीर अन्य प्राणीको तुलनामा निकै संवेदनशील हुन्छ । यही कारण भविष्यमा हुने घटनाप्रति हाम्रो शरीरले पहिले नै आशंका गरिरहेको हुन्छ । शरीरको विभिन्न अंग फर्फराउनुले भविष्यमा हुने घटनाबारे जानकारी दिन्छ । समुद्र शास्त्र अन्तर्गत कुन अंग फर्फराउँदा भविष्यमा कस्ता घटना हुन सक्छन् भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ । शरीरका अंग फर्फराउनुले भविष्यमा हुने राम्रो र… पुरा पढौ
कपाल लामो भएन ? चिन्ता नगर्नुस्, यस्ता छन् उपायहरु
अहिले कम उमेरमै कपाल फुल्ने समस्या धेरैको हुने गर्छ । सानो उमेरमा कपाल फुल्दा धेरैले तनाव बेहोरनुपरेको छ । यी हुन सेतो कपाललाई कालो बनाउने घरेलु उपायहरु । अमलाअमला स्वास्थ्यका लागि मात्र उपयोगी नभई कपालको स्वास्थ्यका लागि पनि उपयोगी छ । यसको नियमित प्रयोगले सेतो कपालको समस्या समाधानमा सहयोग गर्छ । अमलामा मेहन्दी मिसाएर यसको घोललाई कपालमा लगाउनाले कन्डिसनिङको काम गर्छ । अमलालाई काटेर तातो नरिवलको तेलमा मिसाएर पनि लगाउन… पुरा पढौ
‘ब्ल्याक होल’ के हो ?
हामी सबैले देखिरहेका छौं, खुल्लाचौरमा बसीन्वारनदेखिको बल लगाएर जोडले अनन्त आकाशमा हुत्याइएको गोटेढुंगा केही बेरपछि पृथ्वीतर्फ (मैदानमा) नै फर्किन्छ। आकाशतिर हु¥र्याइएका सबै वस्तुहरु आखिर पृथ्वीतिर मात्र किन तानिन्छन्?स्याउको गेडा पनि त जमिनमै खसेको छ, आखिर किन ?यस्तै घटनाक्रमहरुले सोह्रौं शताब्दीतिर बेलायतका सर आइज्याक न्युटनको ध्यानाकर्षण गरायो र उनले यसतर्पm गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरी अन्ततः सन १६८७ मा विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षणको नियम प्रतिपादन गरे। यस्तै योगदानका कारण उनले उचाइ हासिल गरे, जसको… पुरा पढौ